लोकसंवाद संवाददाता, पुष १४, २०७६
काठमाडौँ, एजेन्सी । शिर्डीको साईँ बाबा मन्दिरप्रसादालयमा यस वर्ष १.६३ करोड भक्तले भोजन ग्रहण गरेका छन् । यो सङ्ख्या पछिल्लो वर्षको तुलनामा १० लाखले बढीहो । त्यस्तै श्रद्धालुले आफ्नो स्वेच्छाले २० करोड ८० लाख भन्दा धेरै दान समेत दिएका छन्...
रेकर्ड तोड्यो दिल्लीको चिसोले, ६ को मृत्यु, जनजीवन अस्तव्यस्त
बैंक लुटेर मेरी क्रिसमस !
लोकसंवाद संवाददाता, पुष १२, २०७६
काल मार्क्सको चिहानमाथि समेत छेडछाड
काठमाडौँ, एजेन्सी । लण्डनको हाईगेट सिमेट्रीमा रहेको कार्ल माक्र्सको चिहानमाथि वर्षमा दुइपटक छेड़छाडको घटना हुने गरेकाे छ । छेडछाडको आरोपीले चिहानमा भड़काऊ संदेश पनि लेखेका थिए । यो घटना पत्ता लगाउन तथा आरोपीलाई पक्रनका लागि चिहानमा पनि सिसिटिभि क्यामरा लगाएको...
भारत गम्भीर आर्थिक संकटमा !
नरेन्द्र मोदी सरकारका पूर्व मुख्य आर्थिक सल्लाहकार अरविन्द सुब्रमण्यमले भारत सामान्य आर्थिक चपेटामा नभएर निकै गम्भीर आर्थिक संकटमा आइपुगेको बताएका छन् । यसअघि अरविन्दले भारतको कुल गार्हस्थ उत्पादन तथ्यांकलाई पनि अगाडि सारेर भनेका थिए कि सन् २०११ द्येखि २०१६ का...
भदौरियाले बनाए कुहिरोमा पनि चलाउन मिल्ने स्मार्ट हेलमेट !
काठमाडौं, एजेन्सी । अब मोटरसाइकल चालकलाई स्मार्ट हेलमेटको मद्दतले कुहिरोमा पनि सवारी चलाउन सजिलो हुने भएको छ । यसले चालकलाई अगाडी कुनै गाडी भएको वा आउँदै गरेको छ भन्ने बारेमा जानकारी समेत दिनेछ । स्मार्ट हेलमेटमा रहेको अल्ट्रा सोनिक सेंसरले...
उत्पादनमा खोट देखाउन सके एप्पलले पुरस्कार दिने घोषणा
काठमाडौं, एजेन्सी । अमेरिकी टेक्नोलोजी कम्पनी एप्पलले आफ्नो उत्पादन तथा अपरेटिंग सिस्टम सबैभन्दा सुरक्षित रहेको दाबी गर्दै आम मानिसलाई यसमा खोट देखाउन चुनाैती दिएको छ । कम्पनीले सेक्युरिटी बाउंटी प्रोग्राम घोषित गर्दै भनेको छ जसले उसको उत्पादनमा सुरक्षाको बारेमा खोट...
विराट कोहलीको सम्बन्धी १६ ट्याटु खाेपे फ्यान पिंटु बेहेराले !
काठमाडौं, एजेन्सी । भारतको उडिशाका पिंटु बेहेराले चरचित क्रिकेट खेलाडीविराट कोहलीको सबैभन्दा ठूलो फ्यान साबित गर्नका लागि पूरै शरीरमा १६ ट्याटु बनाएका छन् । उनको फोटो हाल शोसल मिडियामा भाइरल भैरहेको छ । उनले ट्याटुमा विराटको उपलब्धि लगायत जर्सी नम्बर...
भारतले पाकिस्तानमाथि कारबाही गरे मुखभरीकाे जवाफ दिइनेछ: पाकिस्तानी प्रम खान
पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानले भनेका छन् कि भारतले आफ्नो घरमा भइरहेको विरोध प्रदर्शनबाट ध्यान हटाउन पाकिस्तानका विरुद्ध केही कारबाही गर्न सक्छ । पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री खानले यो पनि भनेका छन् कि हिन्दु राष्ट्रवादलाई लामबन्द गर्नका लागि युद्ध उन्मादलाई भड्काउन चाहन्छ भारत...
सुपरम्यानको पहिलो फिल्मको केप २ लाख डलरमा बिक्यो !
लोकसंवाद संवाददाता, पुष ५, २०७६
काठमाडौं, एजेन्सी । सुपरम्यानको पहिलो फिल्मको केप २ लाख डलरमा बिकेको छ । हलिउड फिल्मको यादगार वस्तु बेच्ने अक्शन हाउसले यसको जानकारी दिएको हो । जुलिएनको लीलामीमा १७ डिसेम्बरमा लगभग ४ सय सिनेफाइल वस्तुको बिक्री भएको थियो । सन् १९७८...
पाँच वर्षकी बालिकाले स्टलमा कोक तथा कूकीज बेचेर सय जनाको खाजाको व्यवस्था !
काठमाडौं, एजेन्सी । अमेरिकाको पाँच वर्षीय बच्ची कैथलीन हार्डीले सहयोगका लागि उमेर वाधक नहुने उदाहरण प्रस्तुत गरेकीछन् । उनले विद्यालयमा लन्चका लागि पैसा तिर्न नसक्ने विद्यार्थीका लागि केही गर्ने आँट गरिन् जुन उनले गरेर पनि देखाइन् । उनले १२३ विद्यार्थीका...
५७०० वर्ष पुरानो चुइंगम !
काठमाडौं, एजेन्सी । डेनमार्कको सिलथोलममा उत्खननका क्रममा ५७०० वर्ष पुरानो चुइंगम फेला पारेको छ । शोधकर्ताले यसको मद्दतबाट पाषाण युगको एक महिलाको डिएनए पत्ता लगाउन सफल भएका छन् । शोधकर्ताले के दाबी गरेका छन् भने मानव हड्डिका अलावा अन्य नमूनाबाट...
आठ वर्षीय बालक बने युट्युबबाट सबैभन्दा धेरै कमाउने व्यक्ति !
लोकसंवाद संवाददाता, पुष ४, २०७६
काठमाडौं, एजेन्सी । यस वर्ष आठ वर्षीय बालक रेयान काजीले आफ्नो युट्यूब च्यानलबाट २६ मिलियन डलर कमाएकाे समाचारछ। फोब्सम्यागाजिनले २०७६ पुस २ गते बुधवार जारी गरेको लिस्टमा रेयानलाई यस प्लेटफर्ममा सबैभन्दा धेरै कमाउने व्यक्तिका रुपमा सामेल गरिएको छ । काजीको...
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पमाथि महाअभियोग प्रस्ताव पारित
लोकसंवाद संवाददाता, पुष ३, २०७६
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पमाथि संसदको तल्लो सदन हाउस अफ रिप्रिजेन्टेटिभ्सले महाअभियोगको प्रस्ताव पारित गरेको छ । उनी अमेरिकी इतिहासमा नै महाअभियोगको सामना गर्ने तेस्रो राष्ट्रपति बनेका छन् । अब यो प्रस्तावलाई सिनेटको दुई तिहाई बहुमतले पारित गरेमा ट्रम्प पदमुक्त हुनेछन्...
६०९ वर्ष पुरानो मस्जिदलाई ५ किमि पर सारियाे
काठमाडौं, एजेन्सी । टर्कीको ६०९ वर्ष पुरानो एउटा मस्जिद ड्यामको पानीमा डुब्ने खतरा भएपछि त्यसलाई ५ किमि पर सारिएको छ । इर रिज्क नाम गरेको यस मस्जिदलाई हसनकैफ शहरबाट तिगरिस इलाकामा सारिएको हो । वास्तवमा हसनकैफमा इलिसु बांध बनाउँदै गरेका...
इराकमा आन्दोलनका लागि पहिलो पटक महिला सडकमा !
काठमाडौं, एजेन्सी । इराकमा सरकारको भ्रष्टाचार नियन्त्रण, आर्थिक सुधार तथा रोजगारीका लागि डेढ महिना देखि सरकार विरुद्व प्रदर्शन भैरहेको छ । यस प्रदर्शनमा दैनिक हजारौं महिलाले भाग लिन थालेकाछन् । पहिलो पटक इराकमा कुनै पनि ठूलो आंदोलनमा महिलाको उपस्थिति देखिएको...
सय भाषा बोल्ने रोबोट !
काठमाडौं, एजेन्सी । ईरानको तेहरान विश्वविद्यालयले एउटा यस्तो रोबोट बनाएको छ जसले सय भाषा बोल्न सक्छ । यो रोबोटले सय भाषा बोल्ने मात्र नभएर भाषालाई बुझेर अनुवाद गर्ने काम पनि गर्छ । यसको विशेषता यति मात्र नभएर यसले मानिसको मुहार...
इन्टरनेटमा रोक लगाउनेमा भारत सबैभन्दा अगाडि
म असमका मेरा दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई आश्वस्त पार्न चाहन्छु कि उनीहरू नागरिकता संशोधन विधेयक पास भएकामा चिन्तित हुनुपर्दैन । म भरोसा दिलाउँछु, कसैले पनि तपाईंका अधिकार, फरक पहिचान र सुन्दर संस्कृतिलाई नामेट पार्न सक्दैन । यो पलिरहन्छ, फुलिरहन्छ । उल्लिखित भनाइ...